♥Ithala elinokubukwa kolwandle.50m ukuya olwandle, 300m ukuya phakathi nendawo
I-Casa los Peces iyifulethi elizimele elisezingeni eliphezulu elinokubukwa kolwandle, endaweni ekahle kakhulu - 300m ukusuka enkabeni, iminyango emi-3 ukusuka ekhefi yaseNaia, kanye nezinyawo ezingama-50 kuphela ezingenalutho eziwela umgwaqo oyisihlabathi ukuya ogwini.
Ifakwe zonke izisekelo zeholide elihle e-El Cuyo - kanye nokuthintwa okuncane kokunethezeka, okufana nombhede we-King ukuze uqiniseke ukuthi uthola konke okunye okudingayo!
Silandela izinqubo zokuhlanza ezengeziwe ze-Airbnb:
⋆Hlanza zonke izindawo ngezibulala-magciwane ezigunyaziwe
⋆Nikeza izinto zokuhlanza ezengeziwe
Igumbi lokulala: Umbhede omkhulu, i-AC, ifeni engaphezulu, ikhabethe, ibhokisi lediphozithi yokuphepha, amatafula angu-2 aseceleni kombhede, izihlalo ezi-2 kanye ne-hammock.
IBHAFA: indlu yangasese, usinki kanye neshawa. Izinwele ne-shampoo yomzimba kunikezwa, kanjalo namathawula.
Amathawula olwandle kanye ne-parasol nawo ahlinzekwa.
IKHISHINI: ifriji yesiqandisi, isitofu esishisayo esi-2, i-microwave, umshini wekhofi kanye ne-blender, kanye ne-breakfast bar enezihlalo.
I-LOUNGE: Ithelevishini yesikrini esiyisicaba esine-Netflix, isiphephetha-moya esishisayo nombhede womuntu ngamunye ongenziwa njengosofa noma umbhede.
I-TERRACE: ukubuka eduze kwe-Veraniega futhi uphumele olwandle. Inetafula, izihlalo kanye ne-hammock ongajabulela kuyo ukushona kwelanga.
Silandela zonke iziqondiso ezengeziwe ezihlongozwa yi-Airbnb ukuze sizivikele thina nezivakashi zethu.
Sigqoka imaski yobuso, amagilavu namaphinifa.
Ngaphambi kwalolu bhubhane, sahlanza kahle kakhulu (sicela ubheke amazwana) kodwa manje sesiyithuthukisile inqubo ukuze siqinisekise ukuthi akukho ukungcoliswa komoya. Sisebenzisa amasistimu atuswe i-Airbnb futhi sisebenzisa imikhiqizo eqinisekisiwe ukuze sibulale i-COVID19 (i-chlorine, isibulala-magciwane nesifutho sohlobo lwe-Lysol).
Uma unemibuzo eqondile, ngicela ungazise.
I-El Cuyo iyidolobhana langempela lokudoba elinamabhishi amsulwa namanzi amangalisayo e-emerald.Kungamahora ama-2 kuphela nemizuzu eyi-15 ukusuka eCancun kodwa kuze kube manje ayikatholakali futhi ingakathuthukiswa.Ngakho-ke uma ungathanda ukuphumula ebhishi elingenalutho, lapho abantu bendawo benobungane nezinhlanzi zisanda - kunokuzihlalela namahodi e-Quintana Roo, i-El Cuyo indawo yakho!
I-El Cuyo nayo ibekwe kahle ohambweni losuku oluya e-Isla Holbox, amachibi aphinki aseLas Colorada kanye namanxiwa ase-Ek Balam.I-Chichen Itza nayo ingenzeka phakathi nosuku. (Sicela uqaphele ukuthi kukhona abahlinzeki bokuvakasha abalinganiselwe, ngakho-ke imoto eqashisayo yenza lolu hambo lungabizi kakhulu futhi lube lula)
I-El Cuyo iyingxenye yesiqiwu sase-Ria Lagartos futhi izilwane zasendle ziningi.Omakhelwane bakho izimfudu, i-pelican, ama-flamingo nama-iguana, futhi uma unenhlanhla uzothola ihlengethwa noma i-manta enkulu ogwini!Kukhona nezinhlobo zezinyoni ezingu-250 ezihlukene endaweni yolwandle.
Uma ufuna isenzo esengeziwe, ungazama i-kiteboarding.U-El Cuyo ufakwe komagazini abaningi be-kiting bamazwe ngamazwe futhi ngokushesha yaziwa njengendawo entsha eshisayo yokuqopha.Kunezikole ezahlukene kuleli dolobha.
Kulabo abangakhayithi, umoya ohelezayo - ovame ukuvunguza ngesikhathi sokudla kwasemini - usiza ukugcina ukushisa kubekezeleleke!Ngokuvamile ekuseni, akukho moya futhi ulwandle luzolile ngakho-ke lulungele ukugwedla noma ukuhamba ngesikebhe/i-kayaking.Ezemidlalo Ezilawula Kakhulu ziqashisa ama-SUP.
Uma ulwandle luzolile ngempela futhi ukubonakala kucacile (imvamisa ezinyangeni zasehlobo) ukubhukuda nge-snorkelling kuyenzeka futhi kunezindawo ezimbalwa ezithakazelisayo eduze.
IZINKONDLO ZE-EL CUYO:
Njengoba i-El Cuyo iyidolobhana lokudoba kanye nendawo yolwandle nemvelo, ayinazo zonke izinsiza zendawo yesimanje yezivakashi.
Inazo izinto eziyisisekelo - izitolo ezincane zegrosa, umtholampilo kanye negalaji likaphethiloli konke kusendaweni ehamba ngezinyawo ukuya endaweni - kodwa uma ufuna ukujabulela ezinye zezinto 'ezingcono kakhulu' ngesikhathi uhlala, sincoma uhambo lokuya esitolo ngaphambi kokuba uze. .
Qaphela nokho ukuthi kunezindawo zokudlela, izindawo zokudla okulula, ama-pizzeria namakhefi e-El Cuyo. Abanye bavala isizini ephansi - Septhemba no-Okthoba
Ayikho i-ATM futhi zimbalwa kakhulu izindawo ezamukela amakhadi esikweletu - sicela uphathe imali eyanele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Idolobha eliseduze ne-El Cuyo elinama-ATM, izitolo ezinkulu njll, iTizimin - eliqhele ngemoto nje elingaphezudlwana kwehora.
Ulwandle nolwandle lulungele abantu abagezayo kuhlanganise nezingane, ezinesanti esihle, ugu olushelela kancane namanzi afudumele acwebile.Akuvamile ukuthi umoya wasenyakatho ulethe ukhula lwasolwandle ogwini kodwa ngokuvamile phakathi namahora angu-24 lushanelwe.
Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-CASA LOS PECES:
I-Casa los Peces isohlangothini olusentshonalanga yedolobha kumgwaqo wesihlabathi waseVeraniega, iminyango emi-3 nje ukusuka ekhefi yaseNaia.Imaphakathi kakhulu futhi ngaphesheya komgwaqo ukusuka endaweni ehamba phambili yolwandle...indawo ekahle.
Ngihlala e-El Cuyo futhi ngitholakala noma nini lapho ngidingeka.
Kusukela kulo bhubhane, ngizama ukunciphisa ukuxhumana ubuso nobuso futhi ngixhumana njalo nge-Whats noma ngocingo.